मोडुलर किचन बनाउन कति लाग्छ खर्च? के छ यसको विशेषता? :: समिक्षा अधिकारी :: Setopati
सन्दीप आफूले तयार पारेको किचनको तीन वर्ष वारेन्टी हुने बताउँछन्। उनले भने, 'हामीले गरेको काममा तीन वर्ष वारेन्टी हुन्छ। यो बीचमा कुनै पनि सामानमा केही खराबी आए मर्मत गरिदिन्छौं।'
(एभ्रिघर प्रालिको वेबसाइटका यहाँ र फेसबुक पेजका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्कः 984-1223040)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २९, २०७८, ०४:३४:०२
चौधरी ग्रुपको भैंसेपाटी हाउजिङमा के के हुनेछन् विशेषता?
मंगलम सिपिभिसी प्लस पाइपलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह
मापदण्ड मिचेर प्लटिङ गरे कारबाही, जग्गा किन्दा के-केमा ध्यान दिने?
निर्माणको नयाँ आयाम- जगदम्बा ग्याल्भा प्लस र जगदम्बा सुपर साइन